Qoyska Lionel Messi oo doonaya in Xidiga uu ku laabto kooxda Barcelona | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Qoyska Lionel Messi oo doonaya in Xidiga uu ku laabto kooxda Barcelona
Qoyska Lionel Messi oo doonaya in Xidiga uu ku laabto kooxda Barcelona
Qoyska weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inay doonayaan inay dhameystiraan ku laabashada Barcelona.
Laacibka todobada jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa ku dhibtoonayay inuu la qabsado kooxda PSG tan iyo markii uu yimid xagaagii hore isagoo dhaliyay kaliya hal gool 11 kulan oo uu u saftay Ligue 1 intii uu joogay Mauricio Pochettino .
Messi ayaa u diiwaan gashaday shan gool shan kulan oo Champions League ah oo uu u saftay Les Parisiens.
Sida laga soo xigtay El Nacional , xaaska Messi ee Antonela Roccuzzo ayaa ku rajo weyn inay dib ugu soo laabato Catalonia, iyadoo cimilada Paris iyo saaxiibada carruurta ay ku soo laabteen Castelldefels labada arrimoodba.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in tababaraha Barca Xavi iyo daafaca midig ee Dani Alves ay sidoo kale isha ku hayaan inay dib ula midoobaan 34 jirkaan, laakiin Messi aabihiis Jorge Messi ayaa ka soo horjeeda fikradda isagoo aaminsan in Joan Laporta iyo kooxda ay “khiyaaneen”.
Aas qaran oo Loo Sameeyay Xildhibanaad aamina & Farmaajo oo Diiday...
Toban dhacdo oo muhiim ah oo FAHAD YAASIIN uu ka dhuuntay...
Wararkii ugu dambeeyey ee bandowga, doorashada iyo xaaladda Muqdisho
Aqalka Sare iyo Koonfur Galbeed. Lafta Gareen oo biyo raaciyay mucaaradka....
Khayon Edwards Oo Saxiixay Qandaraaskii ugu Horreeyay ee xirfadle Arsenal’
Cristiano Ronaldo oo go’aansaday in uu ka tago Manchester United xagaagan
Real Madrid oo Monaco u soo Bandhigtay Aurelien Tchouameni 59.5 milyan...